Golaha sare Culumaa'udiinka Ahlusuna oo ugu baaqay Xildhibaanada Baarlamanka inay soo doortaan Hogaamiye karti iyo aqoon leh
Golaha Sare Culumaa'udiinka Ahlusuna oo maanta soo saaray bayaan ay uga hadlayaan doorashada Madaxtinimada Soomaaliya ayaa ugu baaqay Xildhibaanada Baarlamaanka inay soo doortaan Hogaamiye Aragti, karti iyo aqoon leh.
Bayaankan ayaa lagu sheegay in magaalada Muqdisho ay gashay waji cusub iyo is badal wanaagsan, kadib markii musharaxiin fara badan oo dalka ka yimid ay u yimaadeen inay ka qeyb galaan Tartanka doorashada Madaxtinimada Soomaaliya.
Culimada ayaa sheegay in muddo 42-sano ay tahay doorasho xor ah oo ka dhacda Muqdisho, iyagoo soo dhoweeyay is bedelada haatan ka jira magaalada.
Waxaa ay bogaadiyeen dadaalka dhinaca ammaanka ee ka socda Muqdisho, iyagoo ugu baaqay shacabka inay kala shaqeeyaan Ciidamada amniga sidii ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka.
Ugu dambeyn Culumaa'udiinka ayaa u rajeeyay shacabka Soomaaliyed inay helaan horumar, barwaaqo iyo nabadgelyo taam ah, waxaana hogaamiyaha cusub ee la soo dooran doono ay ugu baaqeen in dalka iyo dadka ku hogaamiyo Cadaalad iyo sinaan.